Ny jiron'ny varavarankely sy ny fialan-tsasatra ho an'ny trano rihana, trano fonenana sy trano fandinihana Solar Solve Marine
Fiarovana ny Masoandro ho an'ny trano rantsan-kazo, varavaran-trano ary trano fandinihana Windows
Ny SOLASOLV® solomaso mangarahara sy ny masoandro dia afaka manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana azo antoka sy mahazatra ho an'ny mpiasa miasa ao amin'ny trano fidiovana, tranon'ireo varavarana ary efitrano fandinihana amin'ny fanatsarana ny fahitana sy ny fahombiazana ary ny fampihenana ny reraka. Izy ireo dia tsotra mba hikirakirana, mahomby, azo itokisana ary mora ampiasaina. Ny jiro jiro / jiro tsirairay dia natao tsirairay avy mba hamenoana ny mombamomba ny mpanjifa sy ny mari-pamantarana.
Ny masoandro malaza sy ny fisaintsainana dia Nihena hatramin'ny 93% mba hiantohana ny fomba fijery mazava, tsy misy fanovana, ary hatramin'ny 87% ny hafanan'ny masoandro dia nolavina, manampy amin'ny fihazonana ny hafanana kokoa kokoa ao anatin'ny efitrano.
Ny efijery SOLASAFE® jamba / efijery dia mangarahara ary mijanona ao anaty boaty vita amin'ny cassette aluminium misy anodised miaraka amina tadiny borosy mba hiarovana ny sarimihetsika alokaloka amin'ny vovoka sy loto. Ny masoandro SOLAROLA® blind / écran dia vokatra mahomby ihany fa tsy misy cassette miaro - azo apetraka ho vahaolana mandaitra mitovy amin'ny toe-javatra misy olana ny tsy fahampian'ny toerana.
Ny fiarovana rehetra, ny familiana sy ny takolaka dia omena ny lamina tsirairay, miaraka amin'ireo fizarana malalaka ho an'ny fiadanan-tsaina.
Ny sarimihetsika SOLASOLV® dia misy amin'ny loko efatra - GOLD sy SILVER Reflective, ary GRAY sy BRONZE tsy misaina. Ny sarimihetsika manandanja dia natsangana tamin'ny fampiasana sarinà polyester. Ny sarimihetsika dia voahodina mba hampihenana ny rivotra ary ny loko aluminium lamy ao anaty polyester dia mandà ny hafanana. Ny UV-inhibitor dia tafiditra ao anaty polyester mba hanampy amin'ny fanafoanana ny ankamaroan'ny hazavana UV amin'ny masoandro. Ny sarimihetsika GRAY dia misy ihany koa amin'ny loko marevaka.
Ny jiron'ny masoandro / ny efijery dia misy rindrina amin'ny lohataona, fanaraha-maso enta-mavesatra na kapila elektrika, ary vita amin'ny alim-bary misy alim-bary misy alim-bary. Ho an'ny jiron'ny jiron'ny masoandro izay lehibe kokoa noho ny 1800 mm amin'ny halavirana sy ny dian-tongotra, ny sarimihetsika sarimihetsika dia mitaky seza mahazatra (seam) manerana ny sakany.
Ho an'ny varavarankely izay mikisaka mankany aoriana na aoriana, ary mandidy ny jirne / jiro amin'ny ririnina amin'ny rindran-damina miverimberina sy ny rindrina baoritra indroa. Ny fampihetseham-pamoretana ny fihodinana fanindroany dia azo alamina amin'ny lafiny rehetra ary mitazona ny rindran-damina amin'ny tsindrim-peo tsy tapaka mba hahafahan'izy ireo mitsahatra na aiza na aiza ary ny tady dia tsy hiditra amin'ny fitaratra rehefa atsangana ny efijery.
Ny sarimihetsika taratra SOLASOLV® (SILVER sy GOLD) dia mety amin'ny fandinihana fiarovana tokana satria mihetsika toy ny fitaratra iray izy ireo. Ahitana taratra sy mangarahara amin'ny ampahany izy ireo, ka rehefa mazava be ny lafiny iray ary maizina ny iray, mamela ny fijerena avy amin'ny lafiny maizimaizina izy io nefa lasa sarotra ny mahita azy avy amin'ny lafiny maivana. Ny olona eo amin'ny ilan'ny jiro mazava (ety ivelany) dia mahita ny taratr'izy ireo manokana - toa fitaratra mahazatra izy io. Ny olona eo amin'ny lafiny maizina (ao anatin'ny efitrano) dia afaka mahita tsara - toa varavarankely mangarahara io. Noho izany antony izany dia tsy tokony ampiasaina mandritra ny ora antoandro fotsiny ny jamba masoandro / ny efijery, fa mila esorina amin'ny alina.
Ny sarimihetsika fanovozam-baravarankely ho an'ny fitaratra - na dia mety ho toy ny safidy mora ampiasaina mba hampihenana ny hafanana sy ny hafanana avy amin'ny masoandro aza ny sarimihetsika fanakona varavarankely, fa tsy ny filma fanakambanam-panorenana rehetra dia mety ho an'ny karazan-verana rehetra ary ny fametrahana azy dia maharitra azo atao amin'ny alina noho ny fisaintsainana anatiny.
Mangataha fitenenana iray mba hananana efitrano fanaraha-maso voaaro by SolaSOLV® tsy manjelanjelatra, mandrehitra ny jirom-bala.